Izeluleko zezindlu zezinkhukhu
Ngaphambi kokuqala ukusebenza kwenkukhu, cabanga ngemithetho kamasipala yokukhiqiza izilwane esifundeni sakho. Le mithetho-mithetho ihluke kumasipala othile kuya komunye futhi ilawula inombolo yezinyoni nezimo lapho izinyoni zingagcinwa khona. Ngokwesibonelo, kuzoba nemithethonqubo ephathelene nezinyoni ezikude okufanele zigcinwe emagcekeni, izindlu nezitaladi kanye nendlela izilwane ezigulayo okufanele ziphathwe ngayo.
Ukuthola ukufinyelela epulazini akukuvumeli ukukhiqiza izinkukhu. Uma kungakaze kube nokusebenza kwenkukhu yokuhweba epulazini, ukuhlolwa komthelela wendawo kungadingeka ukuze kuhlolwe ukuthi ukukhiqiza kuzothinta kanjani imvelo. Kungenzeka futhi ukuthi kube nemithetho ethile okufanele ilandelwe, isibonelo, izindawo zokukhiqiza kumele zibe yizinga elithile ukusuka ezindlini zezitshalo nezezingulube.
Izindlu zingathatha uhlobo lwesakhiwo esihlala njalo noma esingasuseka. Impilo yenhlalakahle nenhlalakahle kufanele ibe yinto ebalulekile ekuklanyeni noma ekwakheni isakhiwo. Okufanelekile, kufanele kugcinwe izifuyo zivikelekile zingadliwa izilwane, kube lula ukuhlanza nokunciphisa ukuphathwa kwemikhiqizo.
Kumele kube kuhle futhi kugcinwe kahle ukugwema ukungqubuzana nomakhelwane. Ukuhlela ngokucophelela nokuklama kuyadingeka lapho uhlela isakhiwo esihlala njalo ukuze usizakale ngezimo zemvelo.Ukuze kungeniswe umoya endlini, isibonelo, kungase kunengqondo ukwakha isakhiwo ngakho izinhlangothi ezinde zibheke enyakatho naseningizimu, kanti izinhlangothi ezimfushane zibheke empumalanga nasentshonalanga. Lesi sakhiwo kufanele futhi sakhiwe emthambekeni wokugwema izinkinga zamanzi.
Kuzo zombili izakhiwo eziphathekayo nezihlala njalo, kubalulekile ukuqinisekisa ukutholakala komoya ongenayo okwanele. Ezindaweni ezivuthiwe zomoya, ezithengeka kakhulu kunezinhlelo ezivaliwe, kufanele kube namafasitela anezindwangu ezingavulwa futhi zivale ukusiza ukuphatha amazinga okushisa ngaphakathi kwesakhiwo. Amafasitela angafakwa ngendwangu yokugcina izinyoni zasendle ngaphandle.
Ubukhulu bendlu kufanele bucatshangelwe. Ukungasebenzisi isikhala ngokufanele kuzonyusa izindleko zokukhiqiza, ngakho-ke kungcono ukuqala amancane bese wakha izindlu ezengeziwe njengoba ukwenziwa kwenyuka. Ngokusho komthetho we-South African Poultry Association of practice, izigaba ezingaphezu kwamasonto ayishumi nesishiyagalombili ohlelweni lwezinyoni kufanele zifinyelele okungenani indawo engu-450 cm, kuyilapho kungekho izingqimba ezingaphezu kweziyishumi ezivunyelwe ngamamitha ayizikwele emgqeni wobungako obukhululekile noma uhlelo lokugcwala.
Ngomkhiqizo wezinkukhu ezikhiqizelwa inyama, ubuningi bezinyoni abuvunyelwe ukuba bude ngaphezu kuka-40 kg ngemitha yendawo ngayinye ohlelweni lwesitezi, kanti izinyoni ezindala kunamaviki amane ohlelweni lwezinyoni kumele zifinyelele okungenani-450 cm ngenyoni ngayinye. Ubuningi bezinkukhu obungaphezu kweshumi nanhlanu kumamitha wesikwele avunyelwe ohlelweni lokugcina. Ukuphakama kwamakheji kanye nezakhiwo zezindlu kufanele kuvumele ukuhamba kwenhloko yezinkukhu okukhululekile. Ngezinhlelo zezindlu eziphathekayo kubalulekile ukuhambisa izakhiwo ukuvimbela ukugqithisa nokunikeza izindawo isikhathi esanele sokuthola utshani ngaphambi kokuba isakhiwo sibuyiselwe endaweni efanayo.